Af Hayeenka Xukuumadda Itoobiya oo Qiray in Ciidamadoda ay Galeen Gudaha Magaalada Beled Weeyn...
Af hayeenka Xukuumadda Itoobiya Barakat Simon oo Idaacadda BBCda Laanteeda afka Soomaaliga....
Date: 2012-01-01 11:20:26
Af hayeenka Xukuumadda Itoobiya Barakat Simon oo Idaacadda BBCda Laanteeda afka Soomaaliga waraysi siiyay ayaa sheegey in Ciidamada Itoobiyaanka ay galeen gudaha Soomaaliya gaar ahaana Magaalada Beled Weeyne.
Mr Simon ayaa sheegay sababta gelidda gudaha Soomaaliya ay ka danbeysey ka gadaal markii ay Codsi ka heleen Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ay kaga codsatay in gacan laga siiyo la dagaalanka Xarakada Shabaab.
Af ahyeenka ayaa ka gaabsaday in uu sheego Tirada guud ee ciidankii dagalkaas ka qayb galay wuxuuse hoosta ka xarriiqay in ay ahaayeen Tiro ku filan hawl galka ay ka wadaan gudaha Soomaaliya.
Mar wax laga weeydiiyay simon in ay sii wadayaan dagaalka iyo inta ay joogi doonaan Soomaaliya ayuu sheegay in mar walba ay ku xiran tahay Baahida dawladda federaalka Soomaaliya oo uu sheegay in ay kala dhaxayso iskaashi dhinaca sugidda ammaanka ah.
Barakat Simon af hayeenka Xukuumada Itoobiya ayaa sheegey in dagaalkii shalay ka dhacay Magaalada Beled weeyne ee Gobolka Hiiraan uu ahaa mid si fudud ay halkaa uga ceeyriyeen Ciidamadii shabaabka ee halkaa ku sugnaa isagoona meesha ka saaray in Shabaab mar danbe ay ka taliso Magaalada Beled weeyne iyo guud ahaan Gobolka Hiiraan.
Mar af hayeenka la weeydiiyay in dawladda Maraykanku la ogtahay hawl galkaas ayuu ku gaabsaday in Xukuumadda Itoobiya uu kala dhaxeeyo xiriir aad u wanaagsan Dawladda Maraykanka iyo sidii dib loogu soo celin lahaa Nabaddii Soomaaliya.
Af hayeenka Itoobiya ayaa ugu danbayntii sheegay in hawl galkan uu yahay mid lagu wanaajinayo Sugnaanshaha Mandiqadda Geeska Afrika.
Shalay ayay ahayd markii Wasiirka Difaaca ee dawladda Soomaaliya uu sheegay in Dagaalka ay kala qayb galeen Ciidamada Itoobiya soona dhaweynayaan cid kasta oo ka qayb qaadanaysa la dagaalanka waxa uu ku shegay Argagixisada.
Si kasta ha ahaatee Dawladda Itoobiya ayaa hore u sheegtay in aysan dagaalka looga soo hor jeedo Xarakada Shabaab ay qayb ka noqoto iyadoo wadata Magaca AMISOM, waxayse ogolaatay in ay bixiso wixii taageero ah oo looga baahdo gaar ahaana Ciidamada Midowga Afrika iyo kuwa Dawladda Federaalka Soomaaliya.